Hamro Kantipur | सुशान्त सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणमा हत्या गरेको फोरेंसिक रिपोर्टद्वारा अस्वीकार सुशान्त सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणमा हत्या गरेको फोरेंसिक रिपोर्टद्वारा अस्वीकार
सुशान्त सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणमा हत्या गरेको फोरेंसिक रिपोर्टद्वारा अस्वीकार
नयाँदिल्ली, वलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूत तीन महिना भन्दा अघि यस संसारबाट टाढा भए । यद्यपि त्यहाँ केहि आधारभूत प्रश्नहरू छन् जसका उत्तरहरू फेला पार्न बाँकी नै छ । सुशान्तले आत्महत्या गरे कि उनको हत्या गरियो ? यदि एउटा हत्या भएको थियो भने, यो कसले गरे र यदि यो आत्महत्या थियो भने के कारण थियो ? के कसैले तिनीहरूलाई आत्महत्या गर्न उक्सायो ? भारतका तीन ठूला अन्वेषण एजेन्सीहरूले यी प्रश्नहरूको उत्तर खोजिरहेका छन् र अब यी प्रश्नहरूको उत्तर पत्ता लागेको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यम आज तकका अनुसार सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणमा फोरेंसिक रिपोर्टले उक्त हत्यालाई अस्वीकार गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि मृत्यु भएको परिस्थितिले कुनै पनि प्रकारको भ्रामक खेलाडी नभएको र यो आत्महत्याको घटना हो भनेर देखाउँदछ । एम्स मेडिकल बोर्डले सोमबार कोपर अस्पतालले पत्ता लगाएको अनुसन्धान रिपोर्ट सीबीआईलाई बाँडिद्यो ।
एम्सको रिपोर्ट प्राप्त भएपछि अब सीबीआई आत्महत्या कोणलाई ध्यानमा राखी यस केसको छानबिन गर्नेछ । त्यो हो, अर्को अनुसन्धानमा, उत्तर यो प्रश्नमा भेटिन्छ कि यदि सुशान्तले आत्महत्या गरेको थियो भने, उसको कारण के थियो? के कसैले उसलाई आत्महत्या गर्न उक्सायो?
एउटा ल्यापटप, हार्ड डिस्क, क्यानन क्यामेरा र दुई मोबाइल फोनहरू जफत गरियो, जुन अझै अनुसन्धान भइरहेको छ । अनुसन्धानको बारेमा अहिलेसम्म कुरा गर्दै, सीबीआईले २० भन्दा बढी व्यक्तिलाई यस केसमा आरोप लगाएको छ । सबै आयामहरू अब अनुसन्धानमा पूर्ण रूपमा खुला छन् ।एजेन्सी